INkantolo Ephakeme YaseRussia: I-LRO YoFakazi BakaJehova E-Abinsk
ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Armenia Isi-Azerbaijani Isi-Azerbaijani (SesiCyrillic) Isi-Estonia Isi-Ewe Isi-Indonesia Isi-Ukraine IsiBhunu IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFinishi IsiFulentshi IsiGeorgia IsiGreki IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKinyarwanda IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPedi IsiPolishi IsiPutukezi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwidi IsiTagalog IsiTurkey IsiXhosa IsiZulu
IHholo LoMbuso LoFakazi BakaJehova e-Abinsk
INkantolo Ephakeme YaseRussia Izolalela Icala Lokuvalwa Kwe-LRO Yase-Abinsk
Ngo-August 5, 2015, iNkantolo Ephakeme YaseRussia izolalela amacala adluliselwe kuyo mayelana nenhlangano engokwenkolo (LRO) yoFakazi BakaJehova e-Abinsk. Ngasekuqaleni kwalo nyaka, iziphathi-mandla zasedolobheni lase-Abinsk zisebenzise amacebo afana nalawo asetshenziswa eTaganrog naseSamara, zavala inhlangano engokomthetho yoFakazi BakaJehova.
Ivalwe Ngesizathu Esingekho
Ibandla loFakazi BakaJehova e-Abinsk linamalungu angaba yikhulu, amanye awo akhulile ngeminyaka. I-LRO yase-Abinsk yabhaliswa ngo-November 1999 futhi iyinhlangano engokomthetho engumnikazi weHholo LoMbuso oFakazi BakaJehova ababuthanela kulo ukuze bakhulekele.
Ngo-December 2012 nango-October 2013, iziphathi-mandla zamangalela oFakazi BakaJehova ababili e-Abinsk ngokwephula umthetho ngemva kokuba besakaze izincwadi okuthiwe ziyingozi. Bobabili lab’ oFakazi babengamalungu ebandla lendawo, kodwa akekho kubo oyilungu le-LRO yase-Abinsk. Umshushisi walishalazela leli qiniso futhi wasebenzisa ukumangalelwa kwala madoda ngamacala angenasisekelo njengebhaxa lokuvala i-LRO.
Ngokusekelwe kulo mbono onganembile, ngo-March 4, 2015, iNkantolo Yesifunda YaseKrasnodar yakhipha isinqumo “sokuba iNhlangano Engokwenkolo yoFakazi BakaJehova yaseDolobheni lase-Abinsk . . . ibhekwe njengeyingozi, ivalwe futhi ikhishwe oHlwini Lukahulumeni Lwezinhlangano Ezisemthethweni.” Inkantolo ibuye yathi iHholo LoMbuso lase-Abinsk kufanele kube elikahulumeni. Uma iNkantolo Ephakeme ihambisana naleso sinqumo, oFakazi base-Abinsk bazolahlekelwa yindlu yabo yokukhulekela.
Izindlela Zobuqili Ezifanayo
Ngokusebenzisa kabi uMthetho Wokulwa Nemisebenzi Eyingozi, iziphathimandla zase-Abinsk zisebenzise izindlela ezifanayo nalezo ezisetshenziswe izikhulu zikahulumeni ukuze kuvalwe ama-LRO oFakazi edolobheni laseTaganrog nelaseSamara. Njengase-Abinsk, amacala okwenza umsebenzi oyingozi ayengenasisekelo. OFakazi BakaJehova eTaganrog naseSamara bayazilwela enkantolo kula macala angamanga ababekwa wona. Sebedlulisele amacala eNkantolo YaseYurophu Yamalungelo Abantu ngenxa yokungahlonishwa kwenkululeko yabo engokwenkolo.
OFakazi BakaJehova E-Abinsk Bayabekezela
Umphakathi omncane woFakazi BakaJehova e-Abinsk uzoqhubeka nemisebenzi yawo yenkolo, njengawo wonke amakholwa okanye nawo emhlabeni wonke. Nokho, oFakazi BakaJehova bethemba ukuthi iNkantolo Ephakeme YaseRussia izokubona ukungabi nabulungisa benkantolo encane futhi ivumele oFakazi e-Abinsk ukuba baqhubeke behlangana ngokuthula endaweni yabo yokukhulekela.